South Korean ụmụ amaala na-emegide cryptocurrency trading ban
JTBC, a South Korean mba general cable TV netwọk na Broadcasting ụlọ ọrụ na-akọ South Korean ọchịchị bụ “Akpata oyi wụrụ” na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ amaala na-arịọ mwepụ nke Justice Minister na Finance Minister maka ahịa mkpachapụ.
100k signatures e gbara akwụkwọ ịjụ cryptocurrency trading ban amaghị.
30k signatures e gbara akwụkwọ maka mwepụ nke ozi abụọ.
Tuwichi ugbu a na-anabata Bitcoin maka ndenye aha gụgharia ọrụ
tuwichi, ndị kasị ibu n'ụwa video egwuregwu gụgharia ọrụ ugbu a na-anabata Bitcoin maka na ọ bụ ndenye aha gụgharia ọrụ.
Tuwichi na-ekesịpde site Amazon.
Tuwichi eji Bitpay maka nhazi ya Bitcoin azụmahịa.
Abụọ electric powerstations zụrụ na Russia nke m cryptocurrency
Abụọ electric ike ụgbọ na Russia e rere n'ihi nzube nke cryptocurrency Ngwuputa, na Kommersant akwụkwọ akụkọ, ehota isi mmalite. Ọ bụ nke mbụ dị otú ahụ ndibiat na mba.
The abụọ ike ụgbọ nọ Perm Region, na n'ebe ọdịda anyanwụ mkpọda nke Middle Ural Mountains, na na ha gbara agbata obi Republic of Udmurtia. The ụlọ ọrụ a ga-eji ike a data center na a center maka cryptocurrency Ngwuputa, akwụkwọ akụkọ kọrọ.
The ụgbọ na-kọrọ na ere banyere 160 nde rubles (banyere US $ 3 nde) The kọrọ ọhụrụ nwe ike ụgbọ, na-azụ ahịa Aleksey Kolesnik, ka n'ụzọ enen nnweta, ma kwuru na cryptocurrency Ngwuputa ga naanị ga-ekwe omume mgbe Russia adopts mkpa iwu.
A Blockchain bụ a na-ekesa ndekọ technology nke na-eji a na-ekesa, decentralized, na-akọrọ, replicated ndekọ na ike ọha na eze ma ọ bụ onwe, mechiri emechi ma ọ bụ inweta maka òkè, na-dabeere na tokenized cryptoeconomics ma ọ bụ adịghị eji tokens. The data na aha ga-adịghị agbanwe agbanwe, isiokwu oditi, na-echebe site Cryptography na-enye uncensored eziokwu.
Bitcoin Quote si Marc Andreesen:
"Bitcoin na-enye anyị, n'ihi na oge mbụ, a ụzọ onye Internet ọrụ nyefee a pụrụ iche mpempe digital onwunwe ọzọ Internet ọrụ, dị otú ahụ na nyefe na-ekwe nkwa na-mma na ala, onye ọ bụla maara na nyefe emewo, ọ dịghịkwa onye nwere ike aka nke legitimacy nke nyefe. Na nke a pụta itunanya siri ike overstate. "
Tether-egosi ya ...
Fundstrat ngalaba-nchoputa: bitcoin ga-eri $ 25,000, Amazon na Facebook ga-esonye blockchain Indus ...
Na a February 28 Ada aba ...
Salesforce na-workin ...